Akụkọ - Mpaghara ebe ahịhịa na-echekwa ọtụtụ usoro ihe atụ
Mpaghara akwukwo ahihia na-echekwa otutu ihe omuma
Akwukwo ihe nyocha bu ihe di nkpa na usoro nke nyocha ihe omimi. N’ime ihe ọkụkụ nke oge a, mkpebi siri ike nke mpaghara ahihia abụwo akụkụ dị oke mkpa. Ngwaọrụ a bụ ngwa nyocha dị ezigbo mkpa. A na-ejikarị ya atụ ma dekọọ data mpaghara ahịhịa, ma nwee ike ịchekwa ọtụtụ otu data nha n'otu oge. Ya mere, a na-eji ya eme ihe na nkuzi nke osisi ọgbara ọhụrụ.
Ekwenyere m na anyị niile maara na epupụta nwere ike igosipụta uto nke ahịhịa, n'ihi na a na-eme fotoynthesis, transpiration na usoro usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ nke osisi site na epupụta, akwụkwọ osisi ahụ nwekwara ikike ịmịkọrọ ihe. Imirikiti ahịhịa ahihia na-etinye uche site na micro pores n'elu nke epupụta iji banye n'ime osisi ma rụpụta nsonaazụ. Mpempe akwụkwọ bụ ihe dị mkpa iji chọpụta uto nke osisi a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ikpebi ahihia ebe osisi, ị ga-eji ebe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ.
Fọdụ ndị ọrụ ugbo nwere ahụmịhe kwesịrị ịmara na a ga-ekpebi ọnọdụ ahụike nke osisi site na ịlele nha nke epupụta, yana oke nke ahịhịa nwere ike imetụta fotoynthesis, transpiration na iku ume nke osisi, si otú a na-emetụta ogo na mkpụrụ nke ihe ọkụkụ. Yabụ, nchọpụta nke ahihia nwere ike inyere ndị ọrụ aka ịghọta ọnọdụ mmụba ihe ọkụkụ na usoro ndị mmadụ bi, ma nye ntọala maka ịme njikwa kwesịrị ekwesị iji mee ka ihe ọkụkụ na-amị elu. Nke a bụ n'ihi na e nwere ọtụtụ ụzọ iji nweta etu akụkụ ahịhịa osisi dị, mana n'ọtụtụ ụzọ eji atụ ihe, ojiji nke akụrụngwa dị mma karịa, n'ihi na dịka ọnụọgụ nke usoro ntanetị, ịbịaru akwụkwọ na-atụ akwụkwọ, usoro ndị a chọrọ ọtụtụ nke mmesho, na-eri oge ma na-eri oge. Ya mere, iji nyere ndị ọrụ aka ịmechaa nha nke ebe ahịhịa, ha ga-eji mpaghara mpempe akwụkwọ tụọ.
Ojiji nke mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị nnọọ mfe ma dị mma, n'ihi na olu nke mita ahụ pere mpe, ya mere enwere ike iwere ya na mpaghara maka mmesho, ọ nwere ike zuo oke, ngwa ngwa ma ghara ibibi mpaghara akwukwo na akụkụ ndị metụtara ya. , ọ nwekwara ike ịlele mpaghara nke ahịhịa epuru na ihe ndị ọzọ na-adịghị mma.